အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဒုက္ခသည်များအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အာမခံ | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
အလုပ်သင်ကြားရေးလက်ထောက်ရရှိရန်မည်သို့ – ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်ကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင်များငွေပေးချေမှု
ဒုက္ခသည်များအတွက်ထိပ်တဆယ်အလုပ်အကိုင်များ – လက်ရာများနှင့်အကောင်းဆုံးလက်လီရောင်းချမှုအလုပ်အကိုင်များ
ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံ – updated ဒီဇင်ဘာလ 2018
ဒုက္ခသည်များအတွက်ထိပ်တန်းတစ်ဆယ်အလုပ်အကိုင်များ – ဂျော့ဘ်စိုက်ပျိုးရေး
ဒုက္ခသည်များအတွက်ထိပ်တန်းတစ်ဆယ်အလုပ်အကိုင်များ – ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ
ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးရုံကို Going အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ငွေအများကြီးကုန်ကျနိုင်ပါတယ်. ကနျြးမာရေးအာမခံရှိသည်ဖို့အရေးကြီးတယ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ.
ကျန်းမာရေးအာမခံ, သို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာမခံ, သင်တစ်ဦးအာမခံကုမ္ပဏီမှလစဉ်လတိုင်းပေးဆောင်ပိုက်ဆံတစ်ဦးငွေပမာဏဖြစ်ပါသည်. အာမခံများ၏လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်ပရီမီယံလို့ခေါ်ပါတယ်.
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဇာတိဖွားအမေရိကန်နိုင်ငံသားများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအနေဖြင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်ရှင်းပြဖို့အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင်ဆေးဝါးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များသည့်အခါဖြစ်ပါသည်, အာမခံကုမ္ပဏီသူတို့ကိုပေးဆောင်ကူညီပေးသည်. တစ်ဦးကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ဒေါ်လာများစွာကိုထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကျနိုင်ပါတယ်. ရုတ်တရက်ဆေးရုံကနေကြီးမားတဲ့ဥပဒေကြမ်းအရထက်သည်လစဉ်ပရီမီယံဆပ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏. ယေဘူယျအားဖြင့်, ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်ဒုက္ခသည်များအဘို့အကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဇာတိဖွားအမေရိကန်နိုင်ငံသားများအတွက်အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်. ကျန်းမာရေးအာမခံအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအသက်အရွယ်အပေါ်အခြေခံပြီးနေကြတယ်, အလုပ်, သင်လက်ရှိရှိမည်သည့်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ, သငျတို့သအောင်ငွေဘယ်လောက်.
အစိုးရမှတဆင့်ဖုံးလွှမ်းရ (ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး) အာမခံအစီအစဉ်များ, သို့မဟုတ်
ဖြစ်ခြင်း ဖုံးလွှမ်း ဖြစ်လျက်ရှိအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် အာမခံထား. သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးသငျသညျကြီးမားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းများဆပ်ဖို့ရှိခြင်းမှကာကွယ်နေကြတယ်ဆိုလို.
ဖြစ်ခြင်း အရည်အချင်းပြည့်မီ တစ်ခုခုကိုဆိုလိုသည်ဘို့သင့်ကိုတစ်ခုခုရဖို့သို့မဟုတ်တစ်ခုခုအရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်ပါတယ်. သင်နှင့်သင့်မိသားစုအစိုးရအစီအစဉ်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီလျှင်အစိုးရကဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်. သင်သည်အရည်အချင်းပြည့်မီလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်, သူတို့သည်သင့်လုပ်ငွေဘယ်လောက်ကိုကြည့်, မည်မျှကလေးများသင်ရှိသည်, သငျတို့သများမှာအသက်ဘယ်လောက်လဲ. ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်ဒုက္ခသည်များအဘို့အကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစျေးပေါသို့မဟုတ်အခမဲ့ဖြစ်နိုင်သည်, သင်ပထမဦးဆုံးမှာအများကြီးငွေရှာမည်မဟုတ်ပါကတည်းက.
Medicaid ကိုသင်၌နထေိုငျနိုင်ငံတော်က run နေတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအနိမ့်ဝင်ငွေဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးချင်းစီနှင့်မိသားစုများကိုကူညီသို့မဟုတ်မသန်စွမ်းများထောက်ပံ့ပေး. သူတို့ပထမဦးဆုံးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရောက်ရှိသည့်အခါအချို့ကဒုက္ခသည်မိသားစုများ Medicaid ကိုရကြလိမ့်မည်. အရည်အချင်းပြည့်မီဘို့လိုအပ်ချက်ပြည်နယ်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနား.
Medicare ကိုအမေရိကန်အစိုးရကဖွင့်တဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. Medicare အားလုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်အရွယ်မှရရှိနိုင် 65 နှင့်အထက်အပေါင်းတို့နှင့်အသက်အရွယ်မရွေးမသန်စွမ်းနိုင်ငံသားများမှ. Medicare ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူကူညီမယ့်အစီအစဉ်ကိုကမ်းလှမ်း. အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ Medicare.
the Children ရဲ့ကနျြးမာရေးအာမခံအစီအစဉ် (CHIP) အနိမ့်အဘို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ချေ- ကလေးငယ်များနှင့်အတူအလယ်အလတ်ဝင်ငွေမိသားစုများ. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့သားသမီးရဲ့ဆရာဝန်ချိန်းနှင့်ဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှုအဘို့အချေသောကြောင့်, CHIP ကောင်းတစ်ဦးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ဒုက္ခသည်မိသားစုများနှစ်စဉ်စစ်ဆေးမှုများ-ups အဘို့နှင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းများအတွက်ဆရာဝန်မှသူတို့သားသမီးယူရန်အဘို့အဒါဟာအရေးကြီးပါတယ်. သင့်ရဲ့ပြည်နယ်၏ရှာရန် CHIP အစီအစဉ်ကို.
အမြိုးသမီးမြား, မွေးကင်းစ, နှင့်ကလေး (WIC) အထူးသအသက်ငါးနှစ်ထက်ကလေးများအငယ်အထောက်အကူပြုကြောင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်ကိုပြည်နယ်-by-ပြည်နယ်စီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်, ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ, နှင့်နို့တိုက်မိခင်များ. အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်အာဟာရအပေါ်အလေးပေး, စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ရေး, နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ဆောင်မှုများကို access ကိုတိုးတက်အောင်.
သငျသညျအနိမ့်ဝင်ငွေဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးကလေးရှိပါက, ဒီအကောင်းတစ်ဦးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ပိုမိုလေ့လာသင်ယူနှင့်သင့်ပြည်နယ်၏ရှာဖွေ WIC အစီအစဉ်ကို.
သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာတဲ့အခါမှာ, သငျသညျကနျြးမာရေးအာမခံကမ်းလှမ်းတဲ့အလုပ်ကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်. ဤသည်သင့်မိသားစုကိုကူညီလိမ့်မယ်. အလုပ်ရှင်ကုန်ကျစရိတ်အများစုကိုချေနှင့်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုပေးဆောင်. အပိုငွေပမာဏများအတွက်, ဝန်ထမ်းအများအားဖြင့်၎င်းတို့၏ခင်ပွန်းသို့မဟုတ်ဇနီးတို့ပါဝင်သည်ဖို့ရှေးခယျြနှင့်အတူတူပင်အာမခံအစီအစဉ်အပေါ်သူတို့ရှိသည်မဆိုကလေးတွေနိုင်ပါတယ်.
သင်သည်သင်၏အလုပ်စွန့်ခွာခဲ့လျှင်, သင်တစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့သင့်အာမခံလွှမ်းခြုံထားရန်ခွင့်ပြုစေခြင်းငှါ, Cobra လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရအစီအစဉ်မှတဆင့်. Cobra တစ်ခုသာတိုတောင်းသောကာလအဘို့ဖြစ်၏, သင်တပြင်လုံးကိုပရီမီယံကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေးဆောင်ဖို့ရှိစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင်ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အအကြားဖုံးလွှမ်းစောင့်ရှောက်မည်။.
သငျသညျကနျြးမာရေးလွှမ်းခြုံရာပူဇော်သက္ကာကိုတစ်ဦးအလုပ်ရှင်ရှိသည်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်, သငျတို့သတဲ့အစိုးရကအစီအစဉ်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသူမဟုတ်ပါက, သငျသညျပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးအာမခံကိုဝယ်ခြင်းငှါရှိသည်လိမ့်မယ်. ဤသည်စျေးကြီးရှိနိုင်ပါသည်. သင်ကစျေးသက်သာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအက်ဥပဒေအားဖြင့်သင်တို့၏ပရီမီယံနှင့်အတူအကူအညီရထိုက်ခွင့်ဖြစ်နိုင်သည်.
အဆိုပါစျေးသက်သာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအက်ဥပဒေ (ACA), လည်းခေါ် “ObamaCare,” ကျန်းမာရေးအာမခံရှိသည်ဖို့အရှိဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်ဥပဒေရေးရာနေထိုင်သူများလိုအပ်ပါတယ်. ဒါပေမယ့်လည်းအစိုးရဆီကအကူအညီဖြင့်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ကျန်းမာရေးအာမခံကိုဝယ်ခြင်းငှါသင်တို့ကိုခွင့်ပြု. သငျသညျမှာစျေးသက်သာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအက်ဥပဒေအောက်မှာလွှမ်းခြုံရနိုင်လျှင်ကြည့်ရှုပါ www.healthcare.gov.